people Nepal » लामो समय सम्म यौन सम्पर्क गर्नको लागि के-के गर्नु पर्छ ? लामो समय सम्म यौन सम्पर्क गर्नको लागि के-के गर्नु पर्छ ? – people Nepal
लामो समय सम्म यौन सम्पर्क गर्नको लागि के-के गर्नु पर्छ ?
कुनैपनि महिलाले सम्भोगका बेला चरम आनन्द प्राप्त गर्नका लागि पार्टनरको लिंगको लम्बाइको कुनै भूमिका रहन्छ वा रहँदैन भन्ने विषयमा एकमत छैन ।
लिंगको आकारले महिलाको चरम आनन्दमा फरक पार्छ भन्ने हो भने पनि पुरुषको लिंग कत्रो भएमा महिलालाई बढि चरम आनन्द आउँछ भन्ने विषयमा पनि सर्वमान्य दाबी वा प्रमाण कसैले पेश गर्न सकेको थिएन ।तर यी सबै अपूर्णतालाई मेट्दै एक अध्ययनले महिलाका लागि सबैभन्दा आनन्ददायी लिंग कति लम्बाइको हुने ? भन्ने एकिन तथ्य पत्ता लगाएको छ हुनत यो निष्कर्ष विश्वका सबै देशका महिलाका लागि लागु नहुन सक्छ ।
महिलाको कद, यौन चरित्र तथा सम्भोगको आसन लगायतका विषयले महिलाका लागि उपयुक्त लिंगको आकार निर्धारण गर्छ । तरपनि बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनले भने पुरुष पार्टनरको लिंग ५.८ इन्च वा त्यो भन्दा केही लामो भएमा महिलाले सेक्सका बेला निकै राम्रोसँग यौनसुख प्राप्त गर्ने तथ्य पत्ता लगाएको छ ।
वेस्ट स्कटल्याण्ड विश्वविद्यालयका मनोविज्ञ स्टुवार्ट ब्रोडीले महिलाहरुमा गरेको एक सर्भेक्षण पछि यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
उनले अध्ययनका क्रममा ३ सय २३ जना महिलासँग उनीहरुको यसअघिको यौन सम्पर्क र त्यसको अनुभवका बारेमा प्रश्न सोधेका थिए ।त्यस क्रममा महिलाहरुले औषतमा ५.८ इन्च वा १४.९ सेमी लामो लिंग भएका पुरुषसँगको सम्भोगमा बढि चरम आनन्द प्राप्त गरेको बताएका थिए ।
अध्ययनले के समेत तथ्यको खुलासा गरेको छ भने लिंग जति लामो भयो महिलाहरुमा बढि चरम आनन्द प्राप्त हुन्छ । औषत भन्दा छोटो लिंगले चरम आनन्द प्राप्तिमा बाधा पूराउँछ । अर्थात् छोटो लिंग हुने पुरुषबाट चरम आनन्द पाउन महिलालाई कठीन हुन्छ ।